MAMY RAHARIMANANA: «Hanompo olona fa tsy hanompo vahoaka» | Madatopinfo
MAMY RAHARIMANANA: «Hanompo olona fa tsy hanompo vahoaka»
Olom-baovao. Nitombo iray indray ny kandida hiroso amin’ny fifidianana ho Filoham-pirenena izay hotanterahina amin’ity taona 2018 ity. Mamy Raharimanana, nanambara tamin’ny fomba ofisialy ny filatsaha-kofidiany ny Alarobia 28 Febroary lasa teo teny Ankadikely Ilafy. Kandida izay natolotry ny antoko politika “maeva” na Madagasikara Endrika Vanona. 52 taona ny tenany ankehitriny, manambady ary manan-janaka telo sy zafikely mianadahy. Olon-tsotra izy, matihanina amin’ny tontolon’ny informatika. Tamin’ny taona 2016 no nitsiry tao anatiny ny fanapahan-kevitra hiditra ho kandida Filoham-pirenena. “Mitsangàna, mihazavà fa tongany fahazavanao”,Isaia60:1, io no tarigetra hoentiny.
Fomba fijery vaovao no voalaza fa hoentiny rehefa tonga eo amin’ny fitondrana izy. Efa manana paik’ady hentitra sy mazava hampandrosoana an’i Madagasikara i Mamy Raharimanana, ao anatin’izany ny fampanjakana ny fahandriam-pahalemana, ny ady amin’ny kolikoly sy ny vahaolana amin’ny fidangan’ny vidim-piainana. Nasongadiny nadritra ny fanambarana nataony fa “ny olona aloha … Hanompo olona fa tsy hanompo vahoaka”, izay isan’ireo laharam-pahamehan’ity kandida ity. Mifototra bebe kokoa eo anivon’ny fiaraha-monina ny fampandrosoana rehetra amin’ny alalan’ireo fitaovana manaraka ny teknolojia. Nohamafisiny hatrany ihany koa fa tsy kandida natolotry ny FLM (Fiangonana Loteriana Malagasy) izy fa Andriamanitra no niantso azy amin’io filatsahan-kofidiana io.
Saika tonga nanome voninahitra ity fanambarana miezinezina nataon’i kandida Mamy Raharimanana ity avokoa ireo solontenan’ny antoko Maeva avy any amin’ny faritra toy ny avy Matsiatra ambony, Vakinankaratra, avy any Antsimo. Ary efa manana fahavononana tanteraka ny handray anjara amin’ny fifidianana rehetra ny antoko politika “maeva”.